Xieyanshi Abrasives Yakabatana pamwe neComac!
Makorokoto nekubatana uku. Mushure mekutaurirana kwenguva refu uye kuongorora, Shanghai Xieyanshi Abrasives yakazopasa COMAC'S (Commerce Ndege Corporation yeChina Ltd) yakanyatsoongorora uye kuongorora, vova yavo yechokwadi yakavimbika ...
Kukosha Kwesanding Matanho Mu Woodworking
Nzira dzekukuya dzinosanganisira kukuya kwakaomarara, kukuya mvura, kukuya kwemafuta, kukuya wakisi uye kupukuta mushonga wemazino. Kugaya kwakaomeswa kunogona kukamurwa kuve kukuya kwakaomarara, kukuya kwakadzika uye kukuya kwakanaka. Kukuya kwakaipa kunowanzo shandiswa kubvisa huni hwehuni, mavanga, mamaki eglue uye p ...
Matanho Ekumisikidza Iyo Yakareruka Chishandiso Shelf YeXys Guruva Yemahara Yenhare Yakaomarara Grinder
Nhanho 1 Zvidimbu zveSpare zvikamu: (Zvishoma misiyano yezvikamu zvakasiyana sarudzo) Nhanho 2 ...
Ndeapi akakosha marongero eabrasives?
Hasha Abrasives ndiro zita rakajairika reabrasives uye abrasives, kusanganisira zvigadzirwa zvehasha uye Bai Abrasives zvigadzirwa. Hasha Abrasives dzinozivikanwa semaindasitiri mazino. Mukukuya, hasha kana hasha maturusi anowanzo shandiswa sekukuya maturusi kumuchina zvikamu zvekusangana nehunyanzvi hwekuita ...